LEG?S: Otu G??menti, OPC, Nd? ?z? Si Na-Akwado Mmegide ?m? Igbo Na-az? Ahia N'ahia Alaba
LEGỌS: Otu Gọọmenti, OPC, Ndị Ọzọ Si Na-Akwado Mmegide Ụmụ Igbo Na-azụ Ahia N'ahia Alaba
Ụnyahụ ka ụmụ Igbo na-azụ ahịa n’ahịa Alaba dị na Legọs, kpọkuru onye isi uwe ojii na Naijiria bụ Idris, ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Nke a bụ maka na ndị alaye, ndị OPC na ndị ọrụ gọọmenti si na ngalaba n’ahụ maka ala, bịara kulisịba ụlọ ahịa ha na ihe ndị ọzọ n’ebe ahụ.
Ha gotere ala ruru plọọtụ iri anọ na asatọ (48) kemgbe afọ 2008. Ha goro ala ahụ n’aka ndị nwe ya bụ Omo Eleduwa nke ezinụlọ Kemberi na Adetona, mgbe ha gopuru ya bụ ala, akwụkwọ ya nile zuru oke. Ha zụrụ ya maka iji were na akwaba ngwa ahịa, na ọnọdụ ebe ha na-anọ akwaghasị ahịa ha batara ọhụrụ. Ọchịchị gbara ebe nile, mgbe otu onye nke si na ọ bụ “Almoston Naijiria Ltd” nke onyeisi ya bụ Akande, senitere isi ya, kwuo na ala ahụ bụ nke ya, na gọọmenti steeti Legos nyere ya akwụkwọ ikikere iwere ya bụ ala(C of O). Nke a bụ n’afọ 2010.
N’ọnwa Nọvemba afọ 2015, o kpụpụrụ ndị ahịa ahụ ụlọ ikpe, na-ekwu na ndị ahịa nọ n’ala ya. Mana ka ọnwa Jun gbara ụbọchị iri na ato n’afọ 2016, onye ọka ikpe na-ahụ maka ya bụ okwu, kwuru na ndị ahịa ga-aka na-azụ ahịa ebe ahụ na-enweghị ihe ọbụla e mere ha, ganye na-ekpesịa ya bụ ikpe.
Na-agbanyeghi ihe iwu kwuru, ndị ụlọ ọrụ nke Almoston, site na nkwado nke gọọmenti Legos, bidoro kutusiba ihe nile ha nwere na ya bụ ahịa. Nke a bụ nnukwu nnupu isi nyere iwu obodo nke gọọmenti ji aghụghọ akwado.
Onyeisi ndị uwe ojii, enyela osote onyeisi ndị uwe ojii na Legos iwu ka o nyocha ihe na-eme na ya bụ ahịa, ma hụ na akwafughi ọbara ọbụla n’ebe ahụ.
Ụdị ego gọọmenti Legos ii ndị Igbo akpa, adịghị okwukwu. Ha chọọ ka a gbọọrọ ha nnukwu ego, ha enye ndị ahịa ndị Igbo nọ ebe ahụ nnukwu nsogbu, ha anyụọrọ ha ego. Ọ bụghị ihe taata.